Pancreatitis iyisifo kwamanyikwe, okuyinto kuphakama ngenxa self-ukubhujiswa nezicubu lapho zihlatshwa enzyme yayo lipolytic futhi proteolytic isebenze. Lezi zinguquko ukuvuvukala kwamanyikwe kukhona impendulo izicubu zawo necrosis.
Pancreatitis ezinganeni, njengoba abadala, kukhona oyingozi noma ezingamahlalakhona. Ngaphezu kwalokho, ngokuvamile kutholakala izingane pancreatitis esisheshayo. Kuyinto uhlobo yokusabela kuya ukungasebenzi wokugaya ukudla. Umehluko omkhulu kusukela pancreatitis samanje waphawula ukuthi ukunyamalala ephelele a amanyikwe ukusabela ngaleyo ndlela ngemva elapha isifo esikhulu.
Isifo ezingavamile, okwenzeka wonke amaqembu ubudala, kuyinto pancreatitis acute ezinganeni. Ngakho-ke, kungatholakala futhi izinsana nge kombungu kwamanyikwe. Lolu hlobo lwe-pancreatitis eba uma kukhona ukusabela jikelele kanye lendawo umzimba eziphendula zokugula kwamanyikwe ngenxa umthelela enzyme yayo isebenze.
Lesi sifo kuyingozi ngokwanele. Yingakho isizathu olunzulu kakhulu ukucabanga ngakho kuyinto ubuhlungu esiswini ingane. Phela, okurarako Kuyaphawuleka ukuthi izingane pancreatitis singenzeka cishe ezingeni phansi. Ngakho, izimbangela zezinkumbulo okungase iyiphi izifo ezibangelwa amagciwane (inkukhu Pox, Umkhuhlane), umonakalo pancreatic ngokuqondile noma ilungiselelo okungavamile ezithile izitho zangaphakathi.
Bona pancreatitis Akunzima ngakho. Njengomthetho, ingane ekhononda zobuhlungu ngiyaqaqanjelwa buthuntu esiswini engenhla. Ngokuvamile kungase ukungakhululeki kanye lesi sifo kuhambisane ukuhlanza noma indle. Nge okubi kakhulu ekhethekile ukhetho best iyona esibhedlela ingane, ngoba udokotela uyakwazi kakhulu ekuqedeni ukuhlupheka futhi linqume ukwelashwa kudingekile.
pancreatitis Okungalapheki ezinganeni - isifo okumele njalo baqashwe ngudokotela wakho. Kungcono ukwelapha it in the zokungcebeleka ukuthi zingabantu elidume iziphethu yayo amaminerali. Izingane abaphethwe yilesi sifo kukhona bebophekile ukuba ahlale edla ukudla okukhethekile. Yidla ukudla kufanele kube ngokukhethekile ku shabby futhi izinto eziningi ezincane.
Njengoba kule isifo bakhathazeka njalo mayelana, futhi ngokushesha ubuhlungu, ukwelapha pancreatitis ezinganeni, kuqala, isabelo kusho analgesics okuyinto iphathwa ngomjovo. Khona-ke kancane kancane ngcono ngemva isimo somntwana kungaba ukuthi ukwedlulela kuleso sigaba ithebhulethi.
Futhi ebekiwe izidakamizwa ukuthi ukunciphisa uketshezi kwamanyikwe uqobo. Futhi ngenxa kunciphisa jikelele longasimuhle umzimba wengane. Ngaphezu kwalokho, angabelwa kanye jikelele ukwelashwa bendabuko eziyinkimbinkimbi noma Physiotherapy nokunye.
Ngo exacerbations ezingavamile lesi sifo njengoba ezithile zonyaka anti-ukwelashwa wenziwa Phytotherapy pancreatitis. Njengoba ojwayelekile, kufanele kwenziwe ngoba 1.5 2 izinyanga, kabili ngonyaka. Kodwa uma ubuhlungu chronic, ukwelashwa cishe njalo okudingekayo.
Izitshalo main okuyizinto ngokwanele ngempumelelo endabeni le zezifo umhlonyane futhi immortelle isihlabathi. Izimbali immortelle ukwazi ukususa ukuvuvukala wendlala (amanyikwe), nenyongo sesinye futhi isibindi. Futhi kusebenze amandla secretory ka pancreas.
Umhlonyane imbiza isetshenziswa njengoba alcoholate noma ukumnika evamile. Ukuze wenze lokhu, uthele 1 tbsp. isipuni lokhu ingilazi imbiza namanzi anele ashisayo usiyise ethumbeni. Ubilise imizuzu emithathu kuya kwemine, futhi bagcizelele enye imizuzu 45 ke nzima futhi kudingeka isinyathelo esisodwa noma ezimbili wezipuni ngaphambi ukudla imizuzu engu-15 kathathu ngosuku.
Ngo pancreatitis ezingamahlalakhona tincture ezinjalo kusiza ukunciphisa abalulekile noma ukunyamalala ubuhlungu esiqeshini biliary futhi kwamanyikwe. Ngaphandle zinyamalale dyspepsia, sezinyawo evamile futhi esesuthi ngcono kakhulu.